Hab-dhaqanada arxan-darrada ah ee Ciidamada Dawladda hoose ula dhaqmaan ganacsatada yaryar | Somaliland.Org
December 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Ciidamada Dawladda Hoose ee Hargeysa, ayaa hawl-gal ay maanta sameeyeen si arxan-darro ah ula dhaqmay dadka danyarta ah ee ku ganacsada hareeraha Jidadka Magaalada Hargeysa. kuwaas oo ka burburiyay agabka ganacsiga qaarkood, isla markaana qaar kale ka qaatay.
Gaadiidka Dawladda hoose ee Hargeysa oo ay ka buuxaan Ciidamada Booliska ee Dawladda Hoose, ayaa hawl-gal ay maanta ka sameeyeen Jidka badhtamaha Hargeysa, waxay burburiyeen agabka ay ku ganacsadaan dadka danyarta ah ee adeegyada ganacsi ee yaryar ku iibiya Jidka hareerihiisa, kuwaas oo aan u arxan-dayin habka ay ula macaamilayaan dadka danyarta ah. “Ganacsi yar baanu halkaa dhaqaalaha kala soo baxnaa, Alaabta ay naga daadiyeen, nagana burburiyeen iyo kuwa ay qaateen cid aanu u raacno ma garanayno.” Sidaa waxa yidhi mid ka mid ah dadka laga burburiyay alaabta ganacsi oo u waramay Weriye Somaliland.Org ka tirsan.
Masuuliyiinta Dawladda hoose ee Hargeysa, ayaa hawl-gallo ay hormood ka ahaayeen oo ay ku burburiyeen alaab noocan oo kale ah hore ugu andacooday inay dadkan ku ganacsanaya Jidadka dhinacoodu bilicda wax u dhimayaan, hase ahaatee, marnaba kamay hadal hab-dhaqanka qallafsan ee Ciidamada Dawladda hoose kula dhaqmaan dadweynaha Magaalada Hargeysa.
Maaha markii u horraysay ee hab noocan oo kale ah ay Ciidamada Booliska ee Dawladda hoose ee Hargeysa ula dhaqmaan dadka, hase ahaatee, waxay hore u burburiyeen meherado iyo Deyrka weyn ee xayndaabka u ah Xabaalihii hore ee badhtamaha Hargeysa ee deriska la ah Tiyaatarkii hore ee Hargeysa, taas oo uu Maayarka Hargeysa raalligelin ka bixiyay, isla markaana uu tilmaamay in aanu amar ku siinin tallaabadaas.